Book soo xigsaday: Don't Envy the Bench — TRIP LEE - SITE RASMIGA AH
mar kaliya oo aan si dhab ah u sameeyey dhulka ahayd dhamaadka aad ee ciyaarta-aad ogtahay, marka ay ku riday guys ay dareemayaan xun. Waxaan jeclahay inaan u sheego waxay i badbaadisay kuwa seconds final sidaasi darteed waxaan aamin laga yaabaa badiyeen. Sida aan ku koryeelay gacmaha kooxda soo horjeeda ka dib markii qaylo finalka, Waxaan dareemay sida ciyaartoyda ay wada snickering gudaha markay i eegay oo ku yidhi, "Kulanka Good."
Markii aan ka soo qolka labiska ka dib markii aan soo baxay Roob, qofna doonayay sawir ila. Midkoodna kids dugsiga dhexe kor u eegay ii. Qofna labada koox i masayreen. maxaad? Maxaa yeelay, waan Spike more Lee ka badan Michael Jordan. Waxaan ahaa taageere xirto maaliyada a. Waxaan ahaa nin kuwaas oo aan marnaba ka dhigay ciyaarta, oo qofna hinaaso khadkeeda ah.
Aan abid ma xasuusan karo qof toogasho kicinta ah hawada iska yeedhaysa baxay magaca ah ciyaaryahan kaalin aan la garanayn. guys kuwa weli ku jira xirfadlayaasha, laakiin haddii aad rabto in aad ku ganacsan yaabaa meelaha la Roombo a, waa inta badan bilowga, nin kuwaas oo ka maqan yahay waxaa ka tip-off si qaylo final. Waxaad waligey illoobi doonaa marka Urdun wareegay gacmaha ku midair ama marka Ray Allen ku dhuftay in saddex at qaylo ah. Waa kuwa guys aad rabto in aad noqon. Waxay tahay in tallaabo ee kuwa daqiiqado muhiimka ah, ma ahan oo keliya spectating. Laakiin sabab qaar ka mid ah aan samayn horjeeda marka ay timaado nolosha. Qof waliba waxa uu noqon khadkeeda a.
Maxaan ula jeednaa in? Haddii aad kor u muujiyeen on campus caadiga ah jaamacadda iyo wareystay ardayda ku saabsan gool ay simistarka, ma waxaad maqli lahaa wax badan oo ku saabsan nool, waayo, Boqorku. Waxaad maqli lahaa dheeraad ah oo ku saabsan xiiso fikrad gaabni ka ciyaaro kaalin sheekada grand. Waxaa laga yaabaa in aad xitaa maqli lahaa qaar ka mid ah 7:00 a.m. macquulka ah. diyaar u ah inay qaataan waxaad heli lahaa jawaabo la mid ah dugsiga sare ama dhismo xafiis Waxaan ahay. All oo naga mid ah waxay leeyihiin gool iyo waxay doonayeen, laakiin Ilaah ma aha had iyo jeer iyaga oo ku.
Waxaan rajaynayaa in aad ha u qaadan waxa aan sida xukun xukun dhahayo. Anigu ma aan ahay naqdiya filim CL, jilitaanka ah; Waxaan ahay actor gargaara isku dayaya in ay xaq aad u hesho khadadka aan. lahaa been ayaan haddii aan sheegay in soo socda Ciise had iyo jeer u muuqataa rafcaanka. Xuquuqda had iyo jeer ma dhibsatid.
Waxaan xusuustaa mar ah, ugu dhakhsaha badan ka dib markii aan ku soo biiray shaqaalaha aan kaniisadda, marka saaxiibbadiis oo dhammu waxay ii sii socdeen si ay u qabtaan at ah iid music cajiib ah. Waxaan doonayay inaan halkaas si xun, laakiin ma waxaan ka dhigi laga yaabaa in inta lagu jiro toddobaadka ugu horreeya ee aan shaqo cusub maxaa yeelay waxa ay ku dhacday. Waxaan u lahaa si ay ula dagaalamaan hinaaso qalbigayga. Gaar ahaan markii aan arkay iyaga dhajinta sawirada online of aragnimadooda la yaab leh.
Mar mar waxaan dareemaynaa in jidka nolosha. Waa ay fududahay in ku Xasdi kuwa kale, gaar ahaan marka ay wax weyn sida saaxiibaday Falayeen. Laakiin xitaa marka aan ogahay dulmiya Dadka ku nool yihiin, waxaan mararka qaarkood ka heli nafteena u doonaysa inuu iyaga ku darmado. Oo in dhigaysa socda Ciise dareemayaa is laga soo saaray ciyaarta, ma is bedelay ee. Laakiin sababta aan ku Xasdi dadka kale iyo u qaadan waxaana uu seegay wax?
Maxay tahay sababta aan u maleynayaa inaan tahay KA WAAYEY?
Mid ka mid ah dhibaatooyinka waa in aan ka arki kartaa oo kaliya waxa ku qumman hore oo naga mid ah. Waxaan ka maqnaan sawirka wayn. Waa sida kamarad marka wax ka hor waa in diiradda iyo wax kasta oo ka dambeeya waa kharibi. Waxaan u baahanahay si ay ula qabsadaan lenses si sawir oo dhan noqon doonaa mid cad.
Ma jiraan wax qofka dhulka this aan ku dhibtoon inay si cad u arki. Waa mid ka mid ah cawaaqibka qalbiyadeenna dembi badan. Laakiin marka aad ku tuuraan youthfulness galay isla'egta, kor u Kordhiyey musiibada. Mid ka mid ah-sano jirka ah ku dhibtoon inay si fiican u socdaan, iyo labaatan- somethings halgan si wanaagsan wax u arko.
Ma ahan la yaab leh. Waa qayb ka mid ah waxa ay ka dhigan tahay in ay noqon yar yar ee dunida dhacday. nolosha Our ayaa kooban oo aan annagu waxaan uun nahay arkay aad u badan. Waa adag tahay in la damacsan xujo oo dhan marka aad soo arkay oo kaliya saddex xabbadood. Tani macnaheedu ma aha in aynu ku Gana nafteena ku ceeb; laakiin waxa ay ka dhigan tahay waana in aan ka war, maxaa yeelay, shortsightedness dambi badan waxay keeni kartaa in musiibada.
Weligaa ma isku dayday in wadista Baraf duufaanle a? Christmas ka dib ilmaha aan marka hore waxa uu ku dhashay, Baraf daran ku dhuftay sida xaaskeyga iyo dib baan eryay si DC ka Pittsburgh. baraf The adkaaday laydhkaaga on our SUV oo si dhakhso ah in Masaxaadaha Muraayada hore ma ay samayn karin ilaa la dhacay. laabatooyinka My caddaaday sidii aan eegeysaa qabsadey giraangirta; Waxaan ogaaday nolosha xaaskeyga iyo ina ahaayeen gacmahayga.
Waxaan ahaa mid kacsan. Waan arki karaa oo kaliya dhowr inji hore ee aan wejigayga, sidaas oo kale ayaan macno ahaan ma aqaan halka aan u socday. Anigu ma aan aqoonin waxa uu ahaa ka hor, oo waxaan kaliya u lahaa in ay rajeynayaa in dhammaan shaqeyn lahaa. Taasi ma ahayn dareen fiican. Waxaan ma uu arki karin haddii ay jiraan baabuur ka hor joojiyay ama qof isagoo tirtira off daaqadihii ee stop-iyo-tagaan gaadiidka.
Waxaan xitaa aan soo sheegnay ee waddooyinka Begovic uu weli. Garaacista joojiyaha aad loogu tala galay gaariga ayaa goolka sida kid ah xidhashada sharaabaad dabaqa leben ah. Waad fahmi kartaa sababta ay ahayd drive aan ugu yaraan jecel abid. Waxaan ahaa gaaban iyo meel simbiriirixo leh.
Waligaa fikirtay sida shortsightedness musiibo noqon kartaa nolosheena? Haddii aan ka dhigi kaliya go'aamo ku salaysan waxa ku qumman hore oo naga mid ah, waxaan ku xidhay in la kulanaa qatar. Aad u badan oo naga mid ah ay isku dayayaan in ay ku noolaadaan nolosheena leh oo aan danba waxa dhacaya ka dib.
Helitaanka cabbay xaflad laga yaabaa in muuqdaan sida fikrad fiican in la joogo, laakiin waxa ay fududaysta Ilaah iyo keenaysaa in go'aamada doqon. Hurdada oo aad saaxiib ama saaxiibad u ekaan sidii guul ah xilligan, laakiin noocaas ah Shukaansiga ahaa marna loogu tala galay in lagu diirsaday ka ururka gaarka ah ee guurka ah marka laga reebo.
Waxaan quusin doonaa in si noocaan ah go'aanada ka badan sida aan maraan kitaabka, laakiin dhibic yahay, tahay inaan ka fekerno sawir weyn. go'aan kasta oo aynu samayno waa cad yar ee xujo weyn. Oo aan eegaya sawirka wayn tixraac, waxaan meel doonaa xubnihii qaldan mar kasta. Waa naxdin leh in ay maal daqiiqad in waqti badan uu nool yahay oo dhan.
*Tani waa hoostana aad ka cutubka saddexaad ee buugga cusub ee Trip, Kaca. Ha illoobin, marka aad ka hor-si Kac by January 26, waxaad heli doontaa farabadan hadiyado for free, oo ay ku jiraan track gunno ah oo aan ma ka dhigi on album ah. Halkan waxaa ku qoran dhammaan faahfaahinta ku soo furatay hadiyadihiinna: http://risebook.tv/preorder
Anigu waxaan ahay taageere weyn music Diintiinii laakiin waxaan wax fikrad ah kama aad si fiican u qori kartaa. Ilaah ha idiin barakeeyo xajiyaan> Btw waxaan ka mid ahay kuwa Suriname. ammaana kor
Waxaad leedahay hab la yaab leh nin erayada. waxaa sii wad!
Sidaasayna ahaatay Chileshe • January 16, 2015 at 5:45 waxaan ahay • Reply
xukunka ugu dambeeya ee i helay. Its naxdin leh in ka badan maal daqiiqad in waqti badan uu nool yahay oo dhan. hore ee had iyo jeer waa wax soo saarka ee xaasidnimo meesha otheres waa nolosha. Aan Ilaah ugu mahad naqayaa, waayo, halkaas oo aanu nahay. Waxaa jira sabab sababta aan u jira. Si kastaba ha ahaatee, waxaan u baahan nahay in ay isaga ku qiro waxa oo dhan iyada oo loo marayo.
Wow!!.Ma sugi karo si aad u hesho buug, laakiin sida aan iyaga u soo halkan ka heli in #uganda Africa
Wow…!!! this u jeclaataa sida aad had iyo jeer music igu dhiiri oo kaliya ma sugi karo gettin in this laakiin sida halkan ku Uganda Africa!.sayidkii ha idin barakeeyo,
Qoraalkani wuxuu iga dhigay inaan ka fekero unahay of doorashooyin aan nade ee noloshayda.
riyaaqay hoostana ku dhiirigalin leh hal abuur iyo aad u badan oo dhab ah #stayblessed.
Gao • January 18, 2015 at 1:50 waxaan ahay • Reply
Oh!Ilaah haddii aan kaliya ku yeelan karaan kitaabkan…piece tani waa mid laga cabsado oo hadda aan curiyo sawirka wayn(buugga)..#iyo ssingsToU ka masul ah
WOW! jawaabaha laga helay!!! Waad ku mahadsan tahay Mayne! GBU! Salaan ka Germany!
Terrell • January 20, 2015 at 2:07 waxaan ahay • Reply
Trip Lee, aan anigu jidkaaga waxaan ku badiyay weheliyaan aan Journey adeegaya sayidkii. Waxaan ku soo koray Christian a, laakiin ka waxbaristii ay iskaga cararay. Waxa aan ahaa ilaa aan dhegaystay aad album Life Good iyo laba ka mid ah wacdiyada of youtube in ii ay xoojiso dib jihada Rabbiga. Waxaan doonayaa in aan idinku mahad naqayaa brotha.
tamsyn • December 28, 2015 at 7:35 waxaan ahay • Reply
Trip curiso. Hogaamiyaha A wanaagsan. Your story i waaniyey quruxda aan ogaaday in xiriirka aan la Ciise iyo sida ay muhiim u ah go'aanada yar sii wadi doonaa in aan aayahooda jire. Waxaan ku Qaddarray milicsiga ah Royal Ciise. Waxaa laga yaabaa in akhristaha kasta ka heli khasnadaha sanduuqan khasnad boqornimada yeedhay kici. Salaadda jidka oo dhan ka Town Cape, Koonfur Afrika.